यस्तो सांगीतिक कन्सर्ट कहिल्यै देख्नु भएको छ ? जहाँ गायकदेखी सबै दर्शक बबल्समा लक छन | यस्तो सांगीतिक कन्सर्ट कहिल्यै देख्नु भएको छ ? जहाँ गायकदेखी सबै दर्शक बबल्समा लक छन |
यस्तो सांगीतिक कन्सर्ट कहिल्यै देख्नु भएको छ ? जहाँ गायकदेखी सबै दर्शक बबल्समा लक छन
उज्यालो प्रतिनिधि ६ कार्तिक २०७७, बिहीबार रोचक बिचित्र
काठमाण्डौ । यो कोरोना अवधिमा जे देखियो जुन मान्छेले पहिले कहिल्यै देखेका थिएनन्। मानिसहरूले प्राय: उच्च प्रदूषण भएका स्थानहरूमा मास्कहरू प्रयोग गर्थे, तर अब यो सामान्य भएको छ। यस बाहेक, विश्वभरका मानिसहरूले कोरोना भाइरसबाट बच्न सामाजिक दूरी जस्ता नियमहरू पालना गरिरहेका छन्।
यसैबीच, अमेरिकामा एक संगीत कन्सर्टले विश्वभरका मानिसहरुको ध्यान आकर्षित गरेको छ। वास्तवमा, हालसालै ब्यान्ड ‘द फ्लेमिंग लिप्स’ ले एक अनौठो संगीत कन्सर्ट प्रदर्शन गर्‍यो, जसमा प्रदर्शन गर्ने कलाकारदेखि कन्सर्टसम्मका सबै कलाकारहरू प्लास्टिकको बबलमा लक भए र धेरै रमाईलो गरे।
यो पनि पढ्नुहोस् ... कुन बार जन्मेको मान्छेको स्वभाव र भाग्य कस्तो हुन्छ ?
यो अनौंठो संगीत कन्सर्ट अमेरिकाको ओक्लाहोमा शहरमा सम्पन्न भयो। यसका तस्विर र भिडियोहरू विश्वव्यापी रूपमा भाईरल भइरहेका छन्। यसले विश्वभरि कलाकारहरूलाई एक नयाँ विचार पनि दिएको छ कि कोरोना भाइरस पूर्ण रूपमा निर्मूल नभएसम्म कुनै पनि संगीत कन्सर्ट वा अन्य मनोरन्जन कार्यक्रममा प्लास्टिकको बबल्स प्रयोग गर्न सकिन्छ।
यो पनि पढ्नुहोस् ... सबवेमा मुसाको बक्सिङ,फोटोले पायो 'वाइल्ड लाइफ अवार्ड'
सबै कलाकारहरू र दर्शकहरूले बबल्स क्याप्चर गरेर कन्सर्टको मजा लिइरहेका छन्। रिपोर्टका अनुसार, ब्यान्ड ‘द फ्लेमिंग लिप्स’ जुन मा पहिलो बबल्स प्रदर्शन गर्‍यो र त्यसबेलादेखि उनीहरू त्यस्ता धेरै कार्यक्रमहरू गरिरहेछन्।
यो पनि पढ्नुहोस् ... कुन बारमा कुन देवी-देवताको पूजा गर्ने?
ओक्लाहोमाको बबल्स कार्यक्रममा थोरै व्यक्तिहरू उपस्थित भए पनि, वेन कोयेन भन्छिन् कि अमेरिकी चुनाव पछि ठूलो बबल शो गर्न लागिरहेको छ, जसमा करीव ४ हजार दर्शकहरु सहभागी हुन सक्छन्।
कसले दियो भगवान विष्णुलाई सुदर्शन चक्र ?
भगवान शिव स्वयंमले बनाएको गुफा, जहाँ कलियुगका मानिस
भगवान शिवसँग जोडिएका यी रहस्य तपाईँलाई थाहा छ